August 13, 2019 - Myitter
အတူနေတဲ့အသံဖိုင်ကို ဝေဠုကျော်နဲ့အတူနားထောင်မှ အဆင်ပြေမှာပါဆိုတဲ့ သင်းသင်း
August 13, 2019 Myitter 0
အတူနေတဲ့အသံဖိုင်ကို ဝေဠုကျော်နဲ့အတူနားထောင်မှ အဆင်ပြေမှာပါဆိုတဲ့ သင်းသင်း ကာမလိမ်လည်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့သရုပ်ဆောင်ဝေဠုကျော်နဲ့တရားလို သင်းသင်းတို့ ရုံးချိန်းမှာတော့သင်းသင်းဟာ အတူဆက်ဆံချိန်မှာ သက်သေခံအဖြစ်သွင်းခဲ့တဲ့အသံဖိုင်ကို ရုံးတော်သို့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။အသံဖိုင်ကြောင့် အဆိုပါအမှုအပေါ် လူစိတ်ဝင်စားမှုပိုမိုမြင့်တက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်းသင်းဟာ ဝေဠုကျော်နဲ့ ၇ လ ၈ လကျော်ကြာ လင်မယားလိုပေါင်းသင်းခဲ့တာကြောင့် ဝေဠုကျော်အကြောင်းကို သူမလောက်သိနိုင်တဲ့လူမရှိပါဖူးလို့လဲ သင်းသင်းက မီဒီယာတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့ဖူးတာလဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့က ရုံးချိန်းမှာတော့ […]
သမီးငယ်လေး ဗစ်တိုးရီးယားကို ပြည်သူတွေထံ အပ်ပါတယ်ဟု ဆရာသက္ကမိုးညိုပြော
သမီးငယ်လေး ဗစ်တိုးရီးယားကို ပြည်သူတွေထံ အပ်ပါတယ်ဟု ဆရာသက္ကမိုးညိုပြော သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယား အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်စတင် တွေးခဲ့တုန်းက ရိုးရိုးလွယ်လွယ်လေးပဲ။ အချိန်တန်ရင် တရားခံ အစစ်ကို ဆွဲထုတ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်။ ကိုယ်ပြောတဲ့ တရားခံ အစစ်ဆိုသော အပိုင်းသည် အောင်ကြီး ဟုတ်ခြင်း မဟုတ်ခြင်းကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ […]
ရေကြီးပြီး မိ​ကျောင်း အိမ်​​ခေါင်​မိုး​ပေါ်အထိ တက်လာတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်
ရေကြီးပြီး မိ​ကျောင်း အိမ်​​ခေါင်​မိုး​ပေါ်အထိ တက်လာတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ရေ​ဘေးအန္တရာယ်​ရင်​ဆိုင်​​နေရတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်​ငံ၊ Karnataka ပြည်​နယ်မှာ ဒုက္ခ​တွေကြားထဲကပဲ ထူးခြားဖြစ်​စဉ်​တစ်​ခု ရှိခဲ့ပါတယ်​။ ပြည်​နယ်​မှာ ​ရေလွှမ်းမိုး​မှု​ကြောင့်​ ​နေအိမ်​​တွေ​ဟာ ​ရေထဲစုန်းစုန်းမြုပ်​ကုန်​ပြီး ​အိမ်​​ခေါင်​မိုး​တွေကိုသာ မြင်​ရ​တော့တဲ့ အ​ခြေအ​နေပါ။ ဒီထဲက ​နေအိမ်​တစ်​လုံး​ရဲ့ ​ခေါင်​မိုး​ပေါ်မှာ​တော့ မိ​​ကျောင်းကြီးတစ်​​ကောင် ထီးထီးကြီး တင်​​​လာတာကို […]
ကားဆရာနဲ့ စပယ်ယာတွေတော့ ညာတာစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ….🙏🙏🙏
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ညီအစ်ကိုတို့ကို တစ်ခုလောက်တောင်းဆိုပါရစေဗျာ နွားတင်တဲ့ကားတွေကို ကားဘဲသိမ်းသိမ်း ပစ်ပစ် နွားတွေဘဲယူယူ လုပ်ချင်ရာသာလုပ်ပါ။ ကားဆရာနဲ့ စပယ်ယာတွေတော့ ညာတာစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ….🙏🙏🙏 နောက်ကွယ်မှာ မိသားစုတွေနဲ့ပါ။ ကုန်ပါးတယ် စီးပွားရေးတွေလည်းမကောင်းဘူး ဒါမောင်းမှ ခေါက်ကြေးလေးရမှ နောက်ကွယ်ကမိသားစုတွေ စားရသောက်ရမှာပါ။ယောကျာင်္းပြန်လာမှ ယူထားတဲ့ဈေးဖိုးတွေရှင်းပေးရတဲ့ အဖြစ်တွေရှိတယ်ညီအစ်ကိုတို့…😟 မနေ့ကလည်းပစ်တယ် တစ်ယောက်သေတယ် တစ်ယောက် […]
မွန်ပြည်နယ်ကပြည်သူတွေရွေးချယ်ရကျိုးနပ်တဲ့ပြည်သူ့အစိုးရ ၈. ၈. ၂၀၁၉ ရက်နေ့မှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ ရန်ကုန် – မော်လမြိုင် – ရေး – မြိတ်လမ်း (သံဖြူဇရပ် – ရေး အပိုင်း ) မိုင်တိုင်(၄၅/၀ – ၄၆/၀) အတွင်း ဝယ်ဝင်္ကရာတံတားညီနောင် ချဉ်းကပ်လမ်းများကို ၁၃. […]
လေဖြတ်ရောဂါအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ အပ်လေးတစ်ချောင်း
တရုတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်က အိမ်တိုင်းမှာ အပ်တစ်ချောင်းလောက်တော့ ဆောင်ထားသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အပ်လေး တစ်ချောင်းကပဲ လေဖြတ်သွားတဲ့လူနာကို ထူးဆန်းစွာ ကုသပေးနိုင်လို့ပါ။ ရုတ်တရက် လေဖြတ်သွားတဲ့ လူနာကိုတွေ့ရင် ဒီနည်းလေးအတိုင်း ကယ်ဆယ်ပေးလို့ရတာမို့ သေချာဖတ်ရှုပြီး မှတ်သားထားကြပါနော်။ လူတစ်ယောက် ရုတ်တရက်လေဖြတ်သွားပြီဆိုရင် ဦးနှောက်သွေးကြောတွေ တဖြည်းဖြည်းပြန့်ကားသွားတတ်ပြီး အရေးပေါ်ကုသပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်ပါနည်းလမ်းလေးတွေက […]
့ ရေမြှပ်မယ့် နိုင်ငံတွေအထဲမှာ မြန်မာပြည် ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပါနေတယ်လို့ မိုးလေ၀သ နှင့် ဇလဗေဒ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း..
့ ရေမြှပ်မယ့် နိုင်ငံတွေအထဲမှာ မြန်မာပြည် ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပါနေတယ်လို့ မိုးလေ၀သ နှင့် ဇလဗေဒ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင် နှင့် ခဏတာ “ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်မြှင့်တက်လို့ ရေမြှပ်မယ့် နိုင်ငံတွေ အထဲမှာ မြန်မာပြည် ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပါနေတယ်။ သစ်တောတွေ ပြုန်းတီးမှုက ရာသီဥတုကို […]
ပြန်လာရင်အိမ်အသစ်ကြီးကို ဘုရားနေကဇာတင်မယ်ဆိုတဲ့ ကိုဇွဲလင်းမောင် အိမ်ပြန်ချိန်ကတော့လိုဏ်ခေါင်းကြီးထဲက ရေတွေကိုသာ ကျိန်းဆဲနေမိမှာ အသေချာပါပဲ
မိဘအတွက်အိမ်ဆောက်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့် ကိုရီးယားမှာ ဘဝနိဂုံးချုပ်သွားခဲ့ရတဲ့ ရေစကြိုသားတစ်ယောက် သူ့နာမည်ကတော့ ရေစကြိုမြို့နယ် နတ်ညွန်းရွာက ကိုဇွဲလင်းမောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မိဘကျေးဇူးသိတတ်ပြီးတိုင်းတပါးမှာ ငွေရှာကာမိဘနဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မတွေအတွက် ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ သားကြီးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လောကကြီးကမျက်နှာသာမပေးပဲ ကိုရီးယားနိုင်ငံကြီးမှာ ပင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကိုဇွဲလင်းမောင်ကို သေမင်းကခေါ်သွားခဲ့တာစောလွန်းခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက ရောက်နေခဲ့ပြီး […]
၄ပေခန့်အမြင့်ရှိ ရေစီးနှင့်မျောပါကာ ပြည်​သူ့အတွက်​ အသက်ပေးလှူသွားတဲ့ တပ်မတော်သားတစ်ဦး
တနသာင်္ရီမြိုနယ့် ညောင်ပင်ကွင်းကျေးရွာတွင် ရေစီးနဲ့အတူ မျောပါသွားသော တနသာင်္ရီမြိုနယ့် ညောင်ပင်ကွင်းကျေးရွာတွင် တပ်​မ​တော်​သားတစ်​ဦးမှ ကား​တွေ ဆိုင်​ကယ်​​တွေ အန္တရာယ်​ကင်း​အောင်​ လမ်းကြောင်းပြပေးနေရင်း လမ်းအဖြတ်တွင် ၄ပေခန့်အမြင့်ရှိ ရေစီးနှင့်မျောပါကာ ပြည်​သူ့အတွက်​ အသက်ပေးလှူသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ Han Nyein Oo တနသာင်္ရီမြို့နယ် မြန်မာ့တပ်မတော် တနင်္သာရီမြို့နယ်တွင် တပ်မတော်သားတစ်ဦးရေနစ်သေဆုံး 12.8.2019 […]
အရေးကြီးလို့သေချာဖတ်ပေးကြပါခင်ဗျာ ကျိုက်မရော ရွာတွေက ကယ်ဆယ်ရေး တကယ်လိုအပ်နေတာပါ..ဒါကြောင့် အလှူရှင်အများစုက ကျိုက်မရောကို လာနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်..နောက်နေ့တွေ ကျိုက်မရောလာကြမဲ့အလှူရှင်တွေ သတိပြုမိကြဖို့.. အရေးကြီးတဲ့ အကြံပြုချက်ကလေး (၃) ခု ပေးပါရစေ. ၁) ကျိုက်မရော- မော်လမြိုင် တိုက်ရိုက်သွားလို့ရတဲ့ နတ်စန်းလမ်းမှာ ကားလမ်းတစ်လျှောက် ရေကျော်တာများတဲ့အတွက် ကားတွေ မလွတ်ပါဘူး၊ […]